यस्ता खानेकुराहरु सेवन गरिएमा गर्मीमा लूबाट बचिन्छ
तराईमा गर्मीको राप प्रतिदिन बढ्दो छ । गर्मी बढेसँगै तराई क्षेत्रमा तातो हावा चल्न सुरु गर्छ । एकातिर घामको राप, अर्कोतिर तातो हावा । यस्तो अवस्थामा सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । तराईमा अत्याधि...
३२ लाखको सम्झौतामा प्रियंका अब विज्ञापनमा काम गर्ने
ब्रान्ड दुनियाँमा अहिले सम्म नेपाली कलाकारहरु त्यति जम्न सकेका छैनन् । बलिउडका कलाकारको आम्दानीको ठूलो श्रोत विज्ञापन बनाउनु नेपाली कलाकारको सपनानै बनेको छ । तर, पछिल्ला केही सम...
हिमाल आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परी एक पर्यटकको मृत्यु
धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि गएका एक पर्यटकको मृत्यु भएको छ । १५ हिमाल आरोहणका लागि इटलीका ३७ वर्षीय सिमोन ला तेर्राको हिमपहिरोमा परी मृत्यु भएको हो । गत शुक्रबारदेखि हराएका उनको शव शनिबार फेला परेको प्रेस्टि...
कुन तरकारीले , कस्तो खालको फाइदा गर्छ स्वास्थ्यलाई ?
हरेका प्रकारका तरकारीहरुमा बिभिन्न किसिमका औषधिय गुण पाइन्छन् । मौसमअनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा खान सकेमा रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । गाढा पहेलो र हरिया तरकारीमा प्रशस्त मात्रामा क्यारोटिन पाइन्छ । क्य...
गिजाबाट रगत बग्ने समस्याबाट छुट्कारा चाहनुहुन्छ ?
गिजाबाट रगत बग्ने समस्याबाट धेरै मानिस पीडित हुन्छन् । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छन् । दाँत र गिँजाको नियमित सफाइ नगर्नु, मुखमा संक्रमण हुनु, भिटामिन सी को कमी, ल्युकेमिया जस्ता कारणले गिजाबाट रगत बग्नसक्छ । ...
कुन तरकारीमा कुन औषधिय गुण छ ?
हरेक प्रकारका तरकारीहरुमा बिभिन्न किसिमका औषधिय गुण पाइन्छन् । मौसमअनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा खान सकेमा रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । गाढा पहेलो र हरिया तरकारीमा प्रशस्त मात्रामा क्यारोटिन पाइन्छ । क्या...
राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका सहायक प्रध्यापक डा. अरुण दधिचले लसुनका विभिन्न फाइदाबारे यहाँ जानकारी दिएका छन् । लसुनमा पाइने प्रोटिनले शरिरिक सुगठनमा सहयोग पुर्याउँछ । यसमा कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ जसले श...
सिस्नु’ जसले च्वाट्टै पार्छ यी रोगहरु !
हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका यी पंक्तिमा मात्रै सीमित रहेन अहिले सिस्नोको चर्चा । कुनै बेला गाउँघरमा दुई छाक खानाको जोहो गर्न नसक्ने...
मुखमा अमिलो पानी आउने, छाती तथा घाँटी पोल्ने समस्या छ
मानिसलाई खाना खाएपछि मुखमा अमिलो पानी आउने, छाती तथा घाँटी पोल्ने हुनसक्छ, जसलाई ‘हार्ट बर्न’ भनिन्छ । हार्ट बर्न भन्ने चलन भएपनि मुटु पोलेको होइन । यी लक्षणलाई मेडिकल शब्दाबलीमा जी.ई.आर.डी (ग्यास्ट्रो इसोफेजिय...
अहिले हामीकहाँ पनि जन्मदिन मनाउने कुरा चलनकै रुपमा विकास भयसक्यो । औसतमा जन्मदिनमा केक काट्नु साधारण हो । त्यसमा हामी केक काट्नुभन्दा अघि बालिएको मैनबत्ती निभाउने गर्छौं । तर, विज्ञहरुले यस्तो गर्नुलाई खराब ...